ဧရာဝတီစာကြည့်တိုက်: A Kyan Kaung, Nyan Kaung Myanmars
ရေးသားသူ poemflower at Friday, December 11, 2009
နေ့အိပ်မက် December 11, 2009 at 2:16 PM
ဘိုလိုတော့မဖတ်ဖူးဘူး မြန်မာလိုတော့ ဖတ်ဖူးတယ်... ဒီလိုမျိုးလူမျိုးနာမည်တော့ မတပ်ဘူး ဒီတိုင်း လူသုံးယောက်နှစ်အုပ်စုလို့ပဲ ရေးထားတာ ဖတ်ဖူးတာ :)
Welcome December 11, 2009 at 3:51 PM
တောင်ပေါ်သား December 11, 2009 at 5:34 PM
း) ဖတ်ဖူးတယ် ဒါပေမဲ့ စင်ကာပူတော့မဟုတ်ဘူး အဟီး ဒါလေးကို ပြလိုက်လို့ကတော့ စလုံးတွေ တက်လိုက်မဲ့ ကောပလိန်း အဟီး
ဂျပန်ကောင်လေး December 11, 2009 at 5:36 PM
ဟုတ်တယ်.. ဖတ်ဖူးတယ်.. ဒါပေမယ့် အခုလို စလုံးတွေကို ဆော်ထည့်လိုက်တာ ကောင်းမှ ကောင်း.. ဟီးဟီး....
လင်းကြယ်ဖြူ December 12, 2009 at 12:46 AM
တော်တော် ကို လုပ်တတ်ကြပါလားလို့..ပြုံးမိသွားပါတယ်..
Anonymous December 12, 2009 at 3:43 AM
sithu December 12, 2009 at 2:58 PM
Ha Ha Ha.. First time, i read this post. Very funny and get smile in my mind.. :)Whatever.. thank for this post.
Hee.. Hee.. Can give comment now but can't down and type Myanmar words..
((((((((((((Arr..))))))))))))))) sometime i shout.
Si Thu.. :)
ကိုလူထွေး December 12, 2009 at 8:16 PM
သီတဂူစတား December 13, 2009 at 11:10 PM
ကိုယ့်ချစ်သူက (သို့) ကိုယ့်အမျိုးသမီးက အခြားယောက်ျားလေးနှင့်စကားပြောတာတို့၊ အခြားကောင်လေးတွေက ကြည့်မှာ စိုးရိမ်နေတာတွေကို နားလည်မှု မပေးနိုင်တာဆိုရင်ကော အဲဒါ ဘယ်လိုအချစ်လို့ ခေါ်ပါသလဲ။ အချို့က သ၀န်တိုတာတဲ့၊ အဲဒီသ၀န်တိုတယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုခံစားချက်မျိုးလဲဗျ။
ပြီးတော့ ရည်းစားသက်တမ်းကြာလာရင် အချစ်တွေရော့သွားပြီး နောက်တစ်ယောက်ကို ရှာတယ်ဆိုရင်တော့ ဖြူစင်တဲ့ အချစ်လို့ မဟုတ်တော့ဘူးထင်တယ်၊ သူ့အချစ်က ရမ္မတ်အောက်ရောက်သွားတယ်ထင်တယ်။ သူများတွေပြောတာတော့ အချစ်က မပြောင်းလဲဘူးတဲ့၊ ဟားးးးးးးးး ဟုတ်လား။ အဲဒါဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဗျ။ မပန်းကဗျာရဲ့ ကိုယ်တွေ့လေး ပြောပြပါလား။ သူတွေ့မဟုတ်ဘူးနော်။
Angel Shaper December 15, 2009 at 3:49 PM
ဘာမှ မပြောတော့ဘူးနော်။ ဟိဟိ
မေကျော် December 18, 2009 at 10:18 AM
ခုမှ ဖတ်ဖူးတာ.... :)
kokomaung.uk December 24, 2009 at 6:32 AM
အခုမှဖတ်ဖူးတာပါ။ မြန်မာမှာတုန်းက ရထားကိုဘဲ အမြဲအသုံးပြုသွားလာနေကျဆိုတော့ မျက်စိထဲ ထင်ထင်ရှားရှားဘဲ မြင်ယောင်မိပါတယ်။ ဟာသတော့ဟာသပေါ့။ ဒါပေမဲ့လဲ စာရေးတဲ့သူ ဥာဏ်ကောင်းတယ်။ စဉ်းစာပုံလေးအတုယူစရာပါ။ ဒါမှမဟုတ် သူ့ကိုယ်တွေ့ကိုများ နာမည်ပြောင်းပြီး ဖောက်သည်ချသလားမသိ။